MIORENA TSARA AZA MIOVA
Maro ny zavatra miseho, mandrirotra eo amin'ny fiainana ;
Mampiroroa saina, mety hanozongozona ny fisainana.
Tsy hanaraka ny làlana mahitsy, efa voasoritra hizorana ;
Raha izany no miseho, tsy ho afaka mihitsy ny fatorana.
Maro ny tokantrano simba, noho ny akanga tsara soratra ;
Miezaka ny mandrava, mandady mora toy ny sokatra,
Amin'ny fampiasana angolangola, sy fitaka madinidinika.
Ka ho potraka eo, lavo, raha manao fihetsika tsy voadinika.
Be ny fihavanana rava, noho ny fomba tsy voatandrina ;
Na ny fiteny tsy voahevitra, ka midona an-tampon-kandrina.
Ny fitafy tsy maotina, mety ho handratra ny fo sy saina.
Ka mila mitandrina amin'ny teny, sy ny fitafy ampiasaina.
Eny amin'ny toeram-piasana, mety misy ny fakam-panahy ;
Misintona mora, hitondra amin'ny fihetsika mampanahy :
Toy ny tsy fanajana ny asa, sy ny risoriso ary ny halatra,
Ka mampisitri-belona, tsy hifanena amin'ny olom-pantatra.
Be ny zava-mahasarika, mandavo, eo amin'izao tontolo izao ;
Amin'ny rendrarendra maro, famitahana, ary koa ny be lazao.
Manintona hivarina an-kady, mba tsy ho tafavoaka intsony ;
Satria ho lasan'ny maizina ny fiainana, anjakan'ny lonilony.
Ka miorena tsara, aza miova, ao amin'ny tokan-tranonao ;
Ka miorena tsara,aza miova, ny mendrika ihany re no atao ;
Ka miorena tsara, aza miova, ny teny maotina no entina ;
Ka miorena tsara, aza miova, ny fitafy tsara ihany arentina.
Ka miorena tsara, aza miova, amin'ny asa izay sahanina ;
Ka miorena tsara, aza miova, ataovy foana matihanina ;
Ka miorena tsara, aza miova, miezaha ny mba ha te ho tia ;
Ka miorena tsara, aza miova, eny ho mandrakizay doria.
Ka miorena tsara, aza miova, tazony foana ilay finoana ;
Ka miorena tsara, aza miova, ambara-pahatonga ny fotoana ;
Ka miorena tsara, aza miova, mazotoa hatrany ny hanompo ;
Ka miorena tsara, aza miova, miaraka hatrany amin'i Tompo.